22 | September | 2007 | Layma's World
သူရဲကောင်းများ နှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း …(ပ)
Posted on September 22, 2007 by layma
လေးမ ရဲ့ … အပိုင်းအစ (၃) ထဲက … နောက်ထပ် အတိုအစလေး တစ်ခုကို … ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ် …။ ၂၁.၈.၉၇ ဆိုတဲ့ ရက်စွဲလေးနဲ့ … out of date ဖြစ်နေတဲ့ post လေးကို … blog မှာ … အမှတ်တရ နေရာပေး လိုက်ပါ တယ်… ။
“သူရဲကောင်းများ နှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း …”
သူမသည် လွန်စွာလှပသော ၀တ်စုံဖြူကို ၀တ်ဆင်ထား၏ … ။ ဆံပင်များကို ကျစ်ဆံမြီးသေးသေး လေးများ ကျစ်ထားပြီး … အဖြူရောင် ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထား၏ … ။ သို့သော် လှပလွန်းသော သူမနဲ့ မထိုက်တန် လောက်အောင်ပင် … သူမရောက်ရှိနေသော နေရာက လွင်ထီးခေါင်ပြင် တစ်ခု … ဖြစ်လို့ နေသည် … ။
“ မိုး… မိုး….မိုးပွင့်…” ဟု သူမအား ထစ်ငေါ့စွာ ခေါ်လိုက်သည့် အသံသည် သူမ နားယဉ်ပြီး … အသံဖြစ်၏ ။ အသံရှင်မှာလည်း သူမ မျက်မှန်းတန်းမိသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည် … ။ သို့သော် မည်သူမှန်းမသိ … ။ “ငါ….” …. ထိုသူက နှုတ်ခမ်းကို အနည်းငယ်စူ၍ … စိတ်ကောက် သယောင်ပြုကာ … ခပ်စောင်းစောင်း အနေအထားဖြင့် မကျေနပ်ဟန်ပြ၏ … ။ သူ့ ကျော၌ လေးနှင့် မြှားကို လွယ်ထား၏ … ။ အို… ဒီအသံ … ဒီဟန် တွေကို သူမ စွဲလန်းခဲ့ရသည်ပဲ …. သူ့ ကို သူမ ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့ … ကောင်းကင်မှာ ပျံနေတဲ့ ငှက်ကို … ထိအောင် ပစ်နိုင်တဲ့ မြှားဝိဇ္ဇာ တစ်ယောက်လေ …။
“ ကျင့်ကိုကို … မဟုတ်လားဟင် …”
ထိုသူသည် ကလေးတစ်ယောက်လို မြူးပျော်သွားပြီး … “ မင်း ငါ့ကို ဘာလို့ မေ့နေရတာလဲ … ” ဟု အပြစ်တင်၏ … ။ သူမကိုယ်တိုင်လဲ သူမ၏ မှတ်ဥာဏ်ကို ကျိန်ဆဲ လိုက်မိ သည် … ။
“ ကျင့်ကိုကို … ဘာလာ လုပ်တာလဲ …”
“ မင်းကို လာခေါ်တာပေါ့ … ”
“ မိုးပွင့်ကို ……. ၊ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ….၊ ရှင်က မွန်ဂိုဘုရင်ရဲ့ ရွှေဓါးသမက်ပဲ … ”
“ အာ…… ငါမှ မင်းသမီးကို မချစ်ဘဲ … ”
“ ဒါဆို …ရှင်ဘယ်တရားမလဲ …၊ သူ့ မှာတော့ ရှင့်ကို ချစ်လိုက်ရတာ ….ကျွန်မ မျက်မြင်ပဲ….”
“ မိုးပွင့် … မင်း…ငါ့ ကိုမုန်းသလား …”
“မမုန်းပါဘူး … ရှင့်ကို ဘယ်တော့မှ မုန်းမှာမဟုတ်ဘူး …. ဒါပေမယ့် …”
“ မမုန်းရင် ဆက်မပြောနဲ့ ….၊ ငါနဲ့ လိုက်ခဲ့ …” ပြောပြောဆိုဆို သူမလက်ကို ဆွဲ၍ ခေါ်၏ … ။
“ဟိတ်ကောင် … ကောကျင့် … မင်းဘာလုပ်တာလဲ … ငါအသက်ရှင်နေသရွေ့ ညီမလေးကို မင်းမပိုင်ရဘူး…”
အသံနဲ့ အတူ လျင်မြန်စွာ ရောက်လာတဲ့ အနီရောင် ၀တ်စုံနဲ့ လူကို သူမ သေချာကြည့် လိုက်မိသည် … ။ ဖြောင့်စင်းသော ဆံပင်ရှည်ရှည်များနှင့် ထိုသူက … နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို တင်းတင်းစေ့၍ … သူမတို့အား မျက်မှောင် ကျုံ့ ကာ ကြည့်နေသည် … ။ တစ်ဖက်လူကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေသော … ရဲရင့်သော…သတ္တိရှိသော … ထိုသူရဲကောင်းကို သူမ မမှတ်မိဘဲ … နေပါ့မလား…။
“ အစ်ကို ….”
သူမသည် ပထမလူ၏ လက်ထဲမှ ရုန်းထွက်ရန် … ကြိုးစား လိုက်သည် … ။ သို့သော် သူက မလွှတ်… တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထား၏ … ။
“ ကျန်ကျောင်း … မင်း … ၀င်မရှုပ်နဲ့ … ”
“ ကောင်းပြီလေ … ညီမလေး…ဆုံးဖြတ်ပါ … ”
သူမ မည်သို့ ဆုံးဖြတ်ရမည်နည်း … ။ မည်သူ့ ကို သူမရွေးချယ် ရမည်နည်း … ။ တစ်ဖက်မှာကလည်း သူမ အဖြေကို စိုးရိမ်တကြီး နားစွင့်နေတဲ့ သနားစဖွယ် မင်းမှုထမ်း ကျန်ကျောင်း …၊ တစ်ဖက်ကလည်း … “.. မင်းက ငါနဲ့ အရင်ဆုံးတွေ့ ခဲ့တာပါ …” ဆိုတဲ့ လူရိုးကလေး ကောကျင့် … ။ သူမ မည်သူ့ ကိုရွေးထိုက်ပါ သနည်း ..။
“ မမိုးရယ် … မင်းရွေးချယ်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း… စဉ်းစားသင့်ပါတယ် … ၊ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားရင်ထဲမှာ တစ်နေရာစာ ရခဲ့တာပဲ မဟုတ်လားဗျာ …”
ဘုရားရေ … ဖေးလေး ရောက်လာပြန်ပြီ … ။ ဒီလိုဆိုတော့လဲ … မသေမသပ် စည်းထားတဲ့ ဆံပင်တွေက ကပိုကရို ၀ဲကျနေတဲ့ အနှိမ်ခံ သိုင်းသမားလေးကို သူမ ဥပေက္ခာမပြုနိုင်ပါ … ။ သူ့ ခမျာ ၀ူတန် တောင်ပေါ် မှာ … အားလုံးရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ခံခဲ့ရသည် … ။ သိုင်းပညာကို သင်ချင်လွန်း၍ အများတကာ အိပ်မောကျ ချိန်မှ သင်ခဲ့ရသည် … ။ မွေးကတည်းက အမေကိုလည်းမမြင်ဘူး … အဖေကိုလည်း ခေါ်ခွင့်မရခဲ့သည့် သူ့ ဘ၀ကို သူမ အလွန် သနားမိသည် … ။
အစ်ကို ကျန် နှင့် ကောကျင့်ကြား ဆုံးဖြတ်ရခက်နေချိန်မှာ ကရုဏာသက်ဖွယ် ထိုလူငယ်လေးက ပါဝင် လာပြန်သည် … ။ သူမ မဆုံးဖြတ်တတ်တော့ပါ … ။ တကယ်တော့ သူမ ထို သုံးယောက်လုံးကို … မပစ် နိုင်ပါ …။
“ ကျွန်မ မရွေးချယ်တတ်တော့ဘူး …၊ ရှင်တို့အားလုံး ပြန်ကြတာပဲ ကောင်းပါတယ်….”
လက်ညောင်းသွားပြီ… နောက်နေ့ မှ ဆက်တော့မည် …..။
Filed under: Pieces |	2 Comments »